Dowladdaha South Africa iyo Soomaaliya oo lagu waddo in heshiisyo saxiixan doona – Shacabka News
Dowladdaha South Africa iyo Soomaaliya oo lagu waddo in heshiisyo saxiixan doona
Xubno ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa dalka koonfur Africa kula kulmay xubno metelayay Wasaaraddaha Gaashaandhigga iyo Arrimaha Dibadda ee dalkaasi.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhiga ahna Guddoomiyaha Guddiga Difaaca, Xuseen Carab Ciise ayaa Warbaahinta u sheegay in ay waxyaabo badan oo muhiim ah ka barteen booqashada South Africa.
Dowladdaha Soomaliya iyo Koonfur Africa ayaa lagu wadda in ay gaaraan heshiisyo laxariira iskaashiga Amniga, Dhaqaallaha iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Heshiiskaan ku saabsan iskaashiga Amniga, Dhaqaallaha iyo arrimo kale oo muhiim ah waxa ay imaanayaan xili dhawaan 11-kii bishan Guddoomiyaasha Barlamaannada dalalka Qaaradda Africa, ayaa kulankoodii sanadlaha ahaa ee guddoomiyaasha Baarlamaannada Africa waxaa uu ka jeediyay khudbad.
Shirkaan kasocda dalka Koonfur Africa waxyaaba looga hadlaya ayaa waxaa kamid Africa gaar ahaan dhallinyarada Africa sidii loogu diyaarin lahaa hogaaminta Siyaasadda Qaaradda iyo maamulka dhaqaallaha, iyada oo la siinayo fursadahii ay kula wareegi lahaayeen howshaas.
Author Mohamed YarePosted on 14/08/2017 14/08/2017 Categories WARARKA CALAMKA, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: Madaxweyne Geelle oo hambalyo u diray Uhuru Kenyatta
Next Next post: Deg deg Xildhibaanadda Barlamaanka Hirshabelle oo codka kalsoonnida kala noqdey Madaxweyne Cosoble